Ku-simaha Madaxweynaha Dalka oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Dowladd Ingiriiska ee Soomaaliya “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ku-simaha Madaxweynaha Dalka oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Dowladd Ingiriiska ee Soomaaliya “SAWIRRO”
Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabadiraxmaan oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya David Concar ayaa waxaa uu kala hadlay xoojinta xiriirka saxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Ingiriiska.
Safiirka ayaa marka hore Ku-simaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Golaha Shacabka uga warbixiyay taageerada ay mar walba Soomaaliya siiyaan, isagoo sheegay in UK ay sii kordhineyso taageerada, waxaana uu aad u amaanay horumarada kala duwan ee dalka ka socda.
Waxyaabaha labada dhinac ay aadka uga wada hadleen waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha beni’’aadanimo ee Soomaaliya iyo sidii dowladda Ingiriiska uga qeyb qaadan laheyd caawinta dadka gudaha dalka ku barakacay.
Labada mas’uul ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka ka qabsoomi doona Soomaaliya iyo sidii ay u noqon lahayd doorasho qof iyo cod ah, waxaana Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu dowladda Ingiriiska uga mahadceliyay taageerada ay mar walba siiso dadka Soomaaliyeed iyo Dowladooda.
Ugu dambeyn Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Safiirka Dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya David Concar ayaa isla soo hadal qaaday arrimaha amniga, Garsoorka dalka iyo sidoo kale sidii Dowladda Ingiriiska ay uga qeyb qaadan laheyd horumarinta hay’adaha garsoorka ee dalka.
Tababar ku saabsan Maareynta arrimaha Baarlamaanka oo maalintii 3-aad Muqdisho ka socda “SAWIRRO”
Ganacsiga Soomaalida Masar “Dhageyso”
Ganacsiga Soomaalida Masar "Dhageyso"